May 8, 2022 - Achawlaymyar
ရွင့္အေဖကို က်မအိမ္ေပၚမွာ မထားနိုင္ဘူး ေျပာတဲ့ မိန္းမကို ျပစ္ၿပီး ဖခင္ကို ေခၚဆင္းကာ…see more
ရှင့်အဖေကို ကျမအိမ်ပေါ်မှာ မထားနိုင်ဘူး ပြောတဲ့ မိန်းမကို ပြစ်ပြီး ဖခင်ကို ခေါ်ဆင်းကာ ပြုစုတဲ့ သားလိမ္မာ မိန်းမယုတ်ကို ထားခဲ့ပြီး ဆေးရုံမှာ ဖခင်သေတဲ့အထိ လုပ်ကျွေးပြုစုခဲ့တဲ့ သားလိမ္မာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ဖြစ်ရပ်မှန်ကြေကွဲစရာမြင်ကွင်းလေးပါ လောကမှာ မိန်းမေ+သလို့ နောက်မိန်းမ တစ်ယောက်ထပ်ယူပြီ မိန်းမအစားထိုးလို့ သားသမီးအစားထိုးလို့ ရတာမှန်သော်ငြားလဲ မိဘသေလို့ မိဘအစားထိုး၍ မရနိုင်သည်ကတော့ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့သောလူများသည် မိဘများအပေါ်မှာ ကျေးဇူးတရား မသိတက်ကြသော်ငြာလည်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကIv Kimsean အမည်ရှိတဲ့ အသက် ၃၀ နှစ်ရှိတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးကတော့ ဆေးရုံမှာ ဖခင်သေတဲ့အထိ အလုပ်အကျွေး ပြုစုခဲ့ပါတယ် Kimsean တို့ လင်မယားသည် လူကြီးချင်း သဘောတူလို့ ယူခဲ့ကြပါတယ်။ Kimsean မှာ ငယ်စဉ်က လူငယ်ချင်း … Read more
တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ မှိုကွန်ချာကိုတွေ့ရင် မဖြစ်မနေ အရယူထားပါ🍄🍄🍄
တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရတဲ့ မွိုကြန္ခ်ာကိုေတြ႕ရင္ မျဖစ္မေန အရယူထားပါ ေက်ာ္ မွတ္ထားတာေလးကို မၽွေဝတာပါ ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္ေလာက္က FB မသုံးစြဲၾကပါဘူး နတၡတၱေရာင္ျခည္ မဂၢဇင္းကို လစဥ္ ထြက္တာနဲ႔ ဝယ္ဖတ္ပါ တယ္။ အဲ့ထဲမွာက အခုလို ေဆးဖက္ဝင္ေသာ အေၾကာင္းရာေတြကို အကိုးကားနဲ ပါေလ့ရွိပါတယ္ ။ လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးဝင္ၿပီး အစြမ္းထက္ေသာ အရာမ်ားကို မွတ့္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ မွတ္ထားတဲ အေၾကာင္းရာေလးကဒီလိိုပါ ဟသၤတ ၿမိဳနယ္ ေတာရြာဘက္က ဦးေလးတေယာက္ဟာ အရိုးကင္ဆာ ျဖစ္လို ေဆး႐ုံက ေျခေထာက့္ တဖက္ ျဖတ္ဖို ရက္ခ်ိန္းေပးလိုက္ပါတယ္တဲ့ ထိုဦးေလးဟာ ေျခေထာက္တဖက္ေတာ့ မျဖတ္ေတာ့ဘူး ဒီအတိုင္းသာ အေသခံသြားမယ္ဟု ဆိုကာ အရိုးကြဲမတတ့္ ကိုက့္ခဲ ေနေသာ ေဝဒနာကို ႀကိတ္မွိတ္ၿပီး အန္တုကာခံေနၿပီး … Read more
ပြည်သူကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်နဲ့ ချစ်ငယ် တို့ရဲ့ mtv
Myanmar Idolဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိကြမှာပါနော် ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ သီချင်းတွေကို အသံပါဝါအား ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြော်ငြာများကိုပါ လက်ခံရိုက်ကူးလာရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင်က ဝါရင့်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ မေခလာနဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ မေခလာနဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်တို့ ရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီးချစ်ပေးကြပါအုံးနော် (အောက်တွင် ဇော်ဂျီဖောင့် ဖြင့် ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါ) unicode Myanmar Idolဆုရှင်ဖြစ်တဲ့အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း သိကြမှာပါနော် ဖြိုးမြတ်အောင်ကတော့ သီချင်းတွေကို အသံပါဝါအား ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုတတ်သူဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကြော်ငြာများကိုပါ လက်ခံရိုက်ကူးလာရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြိုးမြတ်အောင်က ဝါရင့်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ မေခလာနဲ့ တွဲဖက်ပြီး သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော် ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ မေခလာနဲ့ ဖြိုးမြတ်အောင်တို့ … Read more
သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ရဲ့ ပထမဆုရတဲ့ အမှတ်စာရင်းကို ဂုဏ်ယူစွာပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ ဖေဖေ စိုင်းလွှမ်း….
သမီးလေး စစ်လွန်းဝတီထက်ရဲ့ ပထမဆုရတဲ့ အမှတ်စာရင်းကို ဂုဏ်ယူစွာပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ ဖေဖေ စိုင်းလွှမ်း…. ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့အဆိုတော်စိုင်းလွှမ်းကစစ်လွန်းလေးကျောင်းမှာပထမဆုရလို့ဂုဏ်ယူနေတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်စိုင်းလွှမ်းက ပထမရတော့သူကိုမရပါဘူးဆိုပြီး ပြောထားမိတဲ့ အိမ်ကလူတွေကအကုန်ရှုံးတာပေါ့၊ ဆုတွေဝိုင်းပေးကြရတော့မယ်၊ မြန်မာစာ ၁၀၀ ထပ်ရတာနဲ့တင်ချီးကျူးမိပါတယ်၊ဘာပဲပြောပြော သင်ပြပေးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမတွေအားလုံးနဲ့အဘွား ပါးနှင့်ဦးလေးတွေရဲ့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးမှုအပေါ်ကြိုးစားအားထုတ်မှူကိုလည်း။ ကျေးဇူးတင်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်၊ဂုဏ်ယူပါတယ် သမီးလေး၊စစ်လွန်းဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ crd zawgyi ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ၊အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္ေတာ့အဆိုေတာ္စိုင္းလႊမ္းကစစ္လြန္းေလးေက်ာင္းမွာပထမဆုရလို႔ဂုဏ္ယူေနတဲ့အေၾကာင္းကိုအခုလိုေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္ေနာ္။ အဆိုေတာ္စိုင္းလႊမ္းက ပထမရေတာ့သူကိုမရပါဘူးဆိုၿပီး ေျပာထားမိတဲ့ အိမ္ကလူေတြကအကုန္ရႈံးတာေပါ့၊ ဆုေတြဝိုင္းေပးၾကရေတာ့မယ္၊ ျမန္မာစာ ၁၀၀ ထပ္ရတာနဲ႔တင္ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္၊ဘာပဲေျပာေျပာ သင္ျပေပးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမေတြအားလုံးနဲ႔အဘြား ပါးႏွင့္ဦးေလးေတြရဲ႕ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈအေပၚႀကိဳးစားအားထုတ္မႉကိုလည္း။ ေက်းဇူးတင္ပီတိျဖစ္ရပါတယ္၊ ဂုဏ္ယူပါတယ္ သမီးေလး၊စစ္လြန္းဆိုၿပီးသူမရဲ႕လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ crd ပရိတသြတကြှီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငတြော့အဆိုတောစြိုငြးလှှမြးကစဈလှနြးလေးကွောငြးမှာပထမဆုရလို့ဂုဏယြူနတေဲ့အကှောငြးကိုအခုလိုပှောပှလာခဲ့ပါတယနြောြ။ အဆိုတောစြိုငြးလှှမြးက ပထမရတော့သူကိုမရပါဘူးဆိုပှီး ပှောထားမိတဲ့ အိမကြလူတှကအေကုနရြှုံးတာပေါ့၊ ဆုတှဝေိုငြးပေးကှရတော့မယြ၊ မှနမြာစာ ၁၀၀ ထပရြတာနဲ့တငခြွီးကွူးမိပါတယြ၊ဘာပဲပှောပှော သငပြှပေးတဲ့ဆရာ၊ဆရာမတှအေားလုံးနဲ့အဘှား ပါးနှင့ြဦးလေးတှရေဲ့ပှုစုပွိုးထောငပြေးမှုအပေါကြှိုးစားအားထုတမြှူကိုလညြး။ ကွေးဇူးတငပြီတိဖှဈရပါတယြ၊ ဂုဏယြူပါတယြ သမီးလေး၊စဈလှနြးဆိုပှီးသူမရဲ့လူမှုကှနယြကစြာမကွနြှာထကမြှာရေးသားဖောပြှထားပါတယြ၊စာဖတပြရိတသြတကြှီးမွားအတှကပြှနလြညတြငဆြကပြေးလိုကပြါတယနြောြ။ ပရိတသြတကြှီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငတြော့အဆိုတောစြိုငြးလှှမြးကစဈလှနြးလေးကွောငြးမှာပထမဆုရလို့ဂုဏယြူနတေဲ့အကှောငြးကိုအခုလိုပှောပှလာခဲ့ပါတယနြောြ။ အဆိုတောစြိုငြးလှှမြးက ပထမရတော့သူကိုမရပါဘူးဆိုပှီး … Read more
ကိုယ့်ရဲ့မွေးချင်း အမြွှာဖြစ်သူကို ဗိုက်ထဲမှာ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရတဲ့ အမျိုးသား
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသားတစ်ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအမျိုးသားရဲ့နာမည်ကတော့ Sanju Bhagat ဖြစ်ပြီး သူဟာအသက် ၃၀ ကျော်လောက်ထိ ဗိုက်ပူပူကြီးနဲ့ နေထိုင်လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အသက် ၃၆ နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ Bhagat ဟာ အသက်ရှူရခက်ခဲလာတာကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ သူ့ရဲ့ဗိုက်ကြီးကို သွားပြခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်မှာတော့ ၎င်းအမျိုးသားဟာ ဗိုက်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ မွေးချင်း အမြွှှာဖြစ်သူက ပိတ်မိနေတယ်ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကတော့ Sanju ရဲ့မွေးချင်းအမွှာဖြစ်သူဟာ အောင်မြင်တဲ့ သန္ဒေသားလောင်း အဖြစ် မခွဲထွက်နိုင်ပဲ Sanju ရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆရာဝန်တွေဟာ Sanju ရဲ့ ဗိုက်ကို ခွဲစိတ်မှုလုပ်ပြီး အထဲက သန္ဓေသားကို ကြိုးစားပြီး ဖယ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာတော့ … Read more
ကားငှားစီးရင်းက ကားထဲတွင်ကျကျန်ခဲ့သော ခရီးသည်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုseemore
စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာလူသားမ်ား၏အက်င့္စ႐ိုက္ကိုျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ အလြန္ပင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေလးစားရသကဲ့သို႔လူတိုင္းကအတုယူသင့္သည့္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕မွ အသက္၄၅ႏွစ္အ႐ြယ္Andy Evansဆိုသည့္အမ်ိဳးသားဟာ လြန္ခဲ့ေသာ၇ႏွစ္ ၂၀၁၅ခုက တကၠစီကားတစ္စီးကိုငွားစီးရင္းပိုက္ဆံအိတ္ကိုကားခဲမွာက်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ထိုအခါပိုက္ဆံအိတ္ကိုျပန္မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဟုသာယူဆထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခါမွာေတာ့တကၠစီေမာင္းသည့္အမ်ိဳးသားဟာလည္း ပိုက္ဆံအိတ္ပိုင္ရွင္ကိုရွာေဖြေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ထို႔ေနာက္၂၀၂၂ ခုႏွစ္အေရာက္မွာေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ိဳးသားဟာ ရွာ​ေတြ႕ခဲ့ၿပီးပိုက္ဆံအိတ္ေလးကိုျပန္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Shoon (Cele Daily) Unicode ကားငှားစီးရင်းက ကားထဲတွင်ကျကျန်ခဲ့သော ခရီးသည်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကို ၇နှစ်ကြာအောင်ပြန်ရှာပြီး ပိုင်ရှင်၏လက်ထဲကိုတစ်ကျပ်မှမယူဘဲပြန်အပ်ပေးခဲ့သည့် လေးစားဖွယ်တက္ကစီယာဥ်မောင်း စာရိတ္တကောင်းမွန်သောလူသားများ၏အကျင့်စရိုက်ကိုမြင်တွေ့ရသည်မှာ အလွန်ပင်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းပြီး လေးစားရသကဲ့သို့လူတိုင်းကအတုယူသင့်သည့် စံပြပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မန်ချက်စတာမြို့မှ အသက်၄၅နှစ်အရွယ်Andy Evansဆိုသည့်အမျိုးသားဟာ လွန်ခဲ့သော၇နှစ် ၂၀၁၅ခုက တက္ကစီကားတစ်စီးကိုငှားစီးရင်းပိုက်ဆံအိတ်ကိုကားခဲမှာကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါပိုက်ဆံအိတ်ကိုပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဟုသာယူဆထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါမှာတော့တက္ကစီမောင်းသည့်အမျိုးသားဟာလည်း ပိုက်ဆံအိတ်ပိုင်ရှင်ကိုရှာဖွေနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်၂၀၂၂ ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ ယာဥ်မောင်းအမျိုးသားဟာ ရှာ​တွေ့ခဲ့ပြီးပိုက်ဆံအိတ်လေးကိုပြန်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Shoon (Cele Daily) စာရိတၱေကာင္းမြန္ေသာလူသားမ်ား၏အက်င့္စ႐ိုက္ကိုျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ အလြန္ပင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္းၿပီး ေလးစားရသကဲ့သို႔လူတိုင္းကအတုယူသင့္သည့္ စံျပပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ မန္ခ်က္စတာၿမိဳ႕မွ အသက္၄၅ႏွစ္အ႐ြယ္Andy Evansဆိုသည့္အမ်ိဳးသားဟာ လြန္ခဲ့ေသာ၇ႏွစ္ ၂၀၁၅ခုက … Read more
မကျဉ်းရွက်အချဉ်ရည်ဟင်းထဲ မန်းကျည်းရွက်ကောက်ထည့်လို့ဆိုကာလူthatမှုဖြစ်ပြား…see more
မနက်ပိုင်းက မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်ခရိုင်၊ မြစ်သားမြို့နယ်၊ ကံဆည်ကျေး ရွာမှာ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ေ-သဆုံ-းသူမှာ မခိုင်(၃၅) နှစ်၊(ဘ)ဦးထွေး ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး မှောက်လျှက်အနေအထားနဲ့ လည်ဂုတ်မှာ ပြတ်ရှဒဏ်ရာ(၁)ချက်ရရှိ ေ-သဆုံ-းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က စုံစမ်းမေးမြန်ခဲ့ရာမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ သိန်းစိုး ဟာ အရ-က်ေ-သစာသောက်စားတတ်သူဖြစ်ပြီး အရက်ဖြတ်ထားတာကြောင့် စိတ်ဂရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ မခိုင် ထမင်းဟင်းချက်နေတုန်း မကျဉ်းရွက် အချဉ်ရည်ဟင်း အတွင်း မခိုင် မှ မကျဉ်းရွက်များ ထပ်ထည့်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ လင်မယားချင်း စကားများရာမှ ယောင်္ကျားဖြစ်သူသိန်းစိုးမှ မိန်းမဖြစ်သူ မခိုင်အား သ-စ်ခု-တ်ဓ-ါးနဲ့ ဦးခေါင်းနှေ-ာက်စေ့အား ခုတ်ရာ အချင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာ ပွဲ-းချင်းပြီး ေ-သဆုံ-းသွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အခုအခါ တရားခံ သိန်းစိုး ကို လူသတ်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မြစ်သားမြို့မရဲစခန်း … Read more
အဆင်ပြေပါစေတော့ဆိုပြီး နားမလည် မတတ်ကျွမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းကို သွားလုပ်မိလို့ seemore
Unicode ပရိသတ်ရေ လူရွှင်တော်လောကမှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် ပရိသတ်တွေကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော် ပေါ်လေး ကိုတော့ အားလုံးပဲမှတ်မိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ လူရွှင်တော်လောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့ရုံသာမက ဇာတ်ကားတွေထဲမှာလဲ တော်တော်များများ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးပေါ်လေး ဟာ အများအားဖြင့် ဘုန်းကြီးဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ လိုက်ဖန်းလွန်းသူ ဖြစ်ပါတယ်။ လူရွှင်တော် ဦးပေါ်လေး ကတော့ ပိုချမ်းသာချင်လို့ နားမလည်တဲ့ ပုဇွန်မွှေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်မိလို့ ဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကို ပ‌ရိသတ်တွေ သူ့လိုမဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ ဦးပေါ်လေး ဟာ ဆိုင်းဆရာမျိုးရိုးမှာ ဆင်းသက်လာသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဗီဇမပါလာတာကြောင့် ဝါသနာပါတဲ့ လူရွှင်တော်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သားဖြစ်သူ ချစ်စု ဟာလဲ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အနုပညာအမွေကို ထိန်းသိမ်းရင်း ကိုယ်တိုင်လဲဝါသနာပါတာကြောင့် လူရွှင်တော်ပဲ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ သမီးဖြစ်သူကတော့ ပန်တျာကျောင်းဆင်းတစ်ဦးပါ။ စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး လောကမှာ … Read more
အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားတော့မဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး
အႏုပညာေလာကေန အၿပီးပိုင္ထြက္ခြာသြားခ်င္တဲ့ သူမရဲ႕စိတ္ကူးကိုေျပာျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုး သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုးကေတာ့ျပင္လွတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတူနဲ႔က်ရာဇာတ္ေကာင္ေတြမွာအေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားပါတယ္ေနာ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုးကေတာ့အမိုက္စားဓာတ္ပုံတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာနာမည္ႀကီးေရပန္းစားလာၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ေဝဖန္မႈကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ္ေနာ္။အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုးက အႏုပညာေလာကေနအၿပီးပိုင္ထြက္ခြာသြားခ်င္တဲ့သူမရဲ႕စိတ္ကူးကိုအခုလိုေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္၊ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Credit Unicode အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင် သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးက အနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit အႏုပညာေလာကေန အၿပီးပိုင္ထြက္ခြာသြားခ်င္တဲ့ သူမရဲ႕စိတ္ကူးကိုေျပာျပလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုး သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုးကေတာ့ျပင္လွတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအတူနဲ႔က်ရာဇာတ္ေကာင္ေတြမွာအေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားပါတယ္ေနာ္။သ႐ုပ္ေဆာင္ သန္းသန္းစိုးကေတာ့အမိုက္စားဓာတ္ပုံတစ္ခ်ိဳ႕ေၾကာင့္လူမႈကြန္ယက္ထက္မွာနာမည္ႀကီးေရပန္းစားလာၿပီး ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ေဝဖန္မႈကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ္ေနာ္။အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္သ႐ုပ္ေဆာင္သန္းသန္းစိုးက အႏုပညာေလာကေနအၿပီးပိုင္ထြက္ခြာသြားခ်င္တဲ့သူမရဲ႕စိတ္ကူးကိုအခုလိုေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္၊ စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။ Credit Unicode အနုပညာလောကနေ အပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုပြောပြလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုး သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးကတော့ပြင်လှတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအတူနဲ့ကျရာဇာတ်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံး သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်နော်။သရုပ်ဆောင် သန်းသန်းစိုးကတော့အမိုက်စားဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကြောင့်လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာနာမည်ကြီးရေပန်းစားလာပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုကိုလဲခံခဲ့ရပါတယ်နော်။အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်သန်းသန်းစိုးက အနုပညာလောကနေအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားချင်တဲ့သူမရဲ့စိတ်ကူးကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit